WAY ISOO KORISAY IYADA OO I MOODAYSA ILMAHEEDII . | Gaaroodi News
WAY ISOO KORISAY IYADA OO I MOODAYSA ILMAHEEDII .
Aniga oo la kaftamaya ayaan waxa aan ku idhi “wajigayga halkee ayaad ku aragtay oo aan kaga imi amma kusoo ilaabay” inta uu qoslay ayaa waxa uu yidhi ,maya taas Adeer ugama jeedin macnaha ,waxaad ilaa muqataa in aad tahay nin aan baraha warbaahinta ku arkay.
Waxa aan maqlaa markasta oo dhagahayga kusoo dhacaaya ,hadalo tilmaamaya in ay i heleen ,balse aanan anigu ka mid ahayn qooyskan,taasi ayaa waxa ay i galisay dareen iyo farxad la’aan ,waayo marnaba maskaxdayda maan galin in qoyskani ay yihiin mid meelahaasi iga soo helay.balse muddo yar ka bacdi ayaa Islaantii isoo qaadatay waxa ay iiga sheekaysay,xaalkii an ku sugnaa markaasi ay isoo qaaday.
Nafi orod ayay kugu aamintaa ,waxa aan go’aan saday , madamaa aan in badan dhagaha ka maqlay in deegaankaygu ahaa Xamar in aan ku noqdo oo aan gaadhi u raaco.
Markii waagii baryay ayaan waxa aan tegay goob makhaayad ah oo laga cuntaynaayo,ma haysto wax lacaga,mida kale waxa aan ahayn inanyar oo cid iyo ciiirsi toona aan lahayn,waxa i haysa Gaajo aad u ba’an.
Kadibna isaga oo aan u fiirsan su’aasha aan waydiiyay waxa ay tahay ,ayaa inta uu dib ii riixay,waxa uu igu dalbaday in ay dibada ii saraan shaqaalahii Makhayada,kadibna dibada laysoo tuuray.
Iyada oo noloshaydu ay halkaasi marayso ,ayaa maalin maalmaha ka mida ,ayaa waxa meel aan jiifo soo istaagtay gabadh markaasi aanan garanayn,aniga oo labada indhood is-daba dhigaaya ayaa waxa ay igu tidhi, ma waxa aad tahay hebel? waxa aan iska idhi “haaaaaa”
Bal u fiirsoo gabadhaasi intaa ay wax ii diyaarinayso waa ay ooyasaa,waxa hadaladeeda ka mid ah ; bal caynkuu noqday eega,ma sidanuu ku danbeeyay hebel,waxa markaaba maskaxdayda kusoo dhacay in gabadhan uu ka maqan yahay Ilama yar oo ka halaabay waxa ay kolba ku soo celcelinaysaa Ilamaha ka maqan magaciisa,taasi oo aan aniguna ka fa’idaystay kadibna aan magacii u sheegtay.
Waxa ay iiga sheekaysay sidii ay Aabahay ku kala tageen iyo halka uu hada ku maqan yahay “waa marka ay ii haysato wiilkii yaraa ee ay dhashay” waxa ay igu tidhi waxa uu Abahaa ku nool yahay wadanka Yemen ,waxa ay gabadhii noqotay mid aniga uun iga fikirta habeen iyo maalin.
Akhristayaasha sharaf ta lahaw waxa aan gaadhay xilli aan noqdo nin wayn,da’daydu markan kama yara 19 sano,Ilahay mahadi ha ka gaadhee Balwad iyo darxumo waa aanu kala raysanay,aan faane ilayn nin qurux u shashay ayaan ahee waxaa soo ifbaxday bilicdaydii shacnigii iyo wanagii aan lahaa ayaa dibada loo soo saaray.
Hoyadaydii sadaxaad inta ay isoo eegtay ayaa waxa ay tidhi,ina mari waxa aynu tagaynaa goobtaasi talafoonka,waxa kasoo hadlaaya Abahaa,waanu israacnay,inta aanu dhexda kusii jiro ayaa waxa ay iskula hadlaysaa ,iyada oo aniga igu soo hal-qabsanaysa “ma markii aan helay inankaygii yaraa ee aan koriyay kuna tabcay ayuu hada ila soo hadlayaa,alla kaasi doqonsanaa iwm .
hoyadaydii sadaxaad waa ay naxday kadibna waxa ay tidhii?” inankeeeeeeeee”
Kadibna sidii aan wax kale uga sugaynay waxaba Talafoonkii qabsaday wiilkii yaraa ee aan booskiisa ku jiray,kuyee “Maama keef xaal,sidee tahay maxaad markaliya ila soo hadliwayday,aniga aabo ayaan ka jeclahay waad i nacday.
Xafadii aan deganaa ayaa la’igaga sheekaystay,culays ayaa igu soo biiray,maalintii danbe Hoyadii waxa ay iigu jawaabtay,waxbadan ayaan ku soo koriyay oo aan ku moodayay Ilmahaygii,balse maanta Ilmahaygii waan helay,adigana intii aan wax kusoo taray Ilahay ajar iyo xasanaad ha iga siiyo,adigana waxaan kugula talin lahaa,Lacagtan qaado wadanka ka Tahriib kana tag anigana hay ilaabin.